Amazon shidin Paperwhite 2015 dib u eegis: ee qiimuhu iyo ugu fiican weli - Rule News
Amazon shidin Paperwhite 2015 dib u eegis: ee qiimuhu iyo ugu fiican weli
Shidin Paperwhite cusub waa Amazon ee ugu fiican weli. Its light, fudud si uu u qabto iyo isticmaalka, halka shaashadda ka mid ah e-warqada screens crispest Waxaan arkay. Waxay ka dhigaysa reading farxad iyo waan kuu akhriyi muddo ka badan sida caadiga ah waxaan doonayay inay.
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Amazon shidin Paperwhite 2015 dib u eegis: ee qiimuhu iyo ugu fiican weli” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Tuesday 23 June 2015 06.00 UTC
Shidin dambeeyay Amazon ee waa version ah updated ah ee ay Paperwhite, hadda la furuutka ah iyo si fudud loo akhriyo screen tirada jeer ee pixels.
Paperwhite waa shidin midrange ah, hoos ku-u-line sare-ah £ 170 safarkan in ballan dawan kasta oo dhamaatay, iyo wixii ka sareeya £ 50 shidin aasaasiga ah. Laakiin ayaa Amazon cunay galay faa'iido ah safarkan ayaa by siinta Paperwhite cusub screen isla e-warqad xallinta sida ay flagship?
design Simple monochromatic
backlight ka dhigayaa screen e-warqada fiiri cad oo waa laysku hagaajin karo iyada oo loo marayo 24 heerarka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
From ka baxsan waa adag tahay si aad u aragto waxa ka bedelay. Waa design isla screen-diiradda. dib waxaa daboolay caag ah oo jilicsan-taabashada ah, bezel hore waa ka sii adag oo wax yar ka cawlan badan jiilka hore.
Waxaa jira badhamada ka batoonka qarkii ugu hooseysa marka laga reebo lahayn - touchscreen a qaadataa daryeelka of inteeda kale. Dadban ama taaban dhinaca gacanta midigta inuu ka soo leexdo bogga, bidix si ay dib ugu. Taabta hogaanka Caabudayseen menu iyo isbedelka goobaha, qabsato backlight ama dooro buug cusub.
Haddii aad hore u isticmaalay shidin ama wax kale e-akhristaha waxa ay noqon doontaa si deg deg ah u yaqaanaan.
screen 6in waa diiradda. Waxay leedahay tirada jeer ee pixels iyo cufnaanta screen of a 88 pixels badan inch (PPI) badan Paperwhite Qarni hore ee 300PPI, oo waa dareemi markii akhriska qoraalka. Wixii la barbardhigo shidin ugu jaban ujecel £ 49 ayaa screen 6in la 167PPI a, oo waa dareemi cad yar.
Related: The Guardian oo Observer haatan waxaa laga heli karaa shidin
Iftiinka hore ka dhigaysa bogga muuqan cad, taas oo ah meesha ay magaca ka yimaadaa, iyo in la hagaajin karo gacanta ka run ahaantii aad u dhalaalaya si aad u darnaaday reading mugdi ah. backlight waa xitaa guud bogga, laakiin hoose ee aad bogga u egtahay wax yar ka grayer.
Waxaa shaashadda ugu fiicneyd abid rakibay si Paperwhite ah, iyo halka ay kulan shidin ugu qaalisan, ee £ 170 safarkan, tiriyo pixel ma aha arrin tayada sare.
Screen: 6in e-warqada (300ppi)
Cabirka: 169 x 117 x 9.1 mm
Weight: 205g (3G version 217g)
Xiriiriyaan: Wi-Fi (3G optional)
nolosha Battery: qiimeeyo qiyaastii 21 saacadood oo reading
noocyada New iyo muuqaalada
font Bookerly waxaa loogu talagalay in ay fududahay in la akhriyo on-screen. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Amazon ayaa font cusub shiddaa ay yeedhay Bookerly, oo waxaa loogu talagalay reading shaashadda halkii bogga ku daabacan, iyo qaababka cusub alfabeetada. Daro ay ka dhigaya akhriska shaashadda badan ka sahlan isticmaalaya Classics sida Helvetica. Waxaan helay il-dhaawac ma ahaa arrin, xitaa inta lagu jiro kalfadhiyada reading dheer - waa ii reading shaashadda on smartphone ama kiniin.
Amazon ee X-ray, qaatey, Eraygii eegno-up iyo horumarka tilmaamayaasha, taas oo aad u sheegto sida badan way idin kaxaysan doonaa cutubka la dhameysan, oo dhan ku dar qiimaha iyo xiisaha ay u waayo-aragnimo la akhriyey.
Hay farta on eray ama magac iyo macnaha sanduuq macluumaadka xasaasiga ah soo booda, taas oo si gaar ah muhiim u ah marka la eego soo gaabiyo, xuruufta ama characters aad lahaa illoobeen ku saabsan.
Si dhakhso ah oo soconaya 21 saacadood
Ha illoobin qof a? feature X-ray The waa wax fudud si ay u sii socoto waa kuma kan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Paperwhite cusub ayaa sidoo kale wax yar ka dhaqso iyo ka badan oo ka jawaabaan halka maraan interface ka badan qarnigii hore. Waxa aanu kula dagaalanto kiniin premium a, laakiin dareensan in uu faham ah e-akhristaha.
Paperwhite The culeyskiisu yahay 205g, waa 9.1mm qaro weyn oo waa u fududahay in ay hay hal gacan. Turning bog la touchscreen waa fudud la laba gacmood, yar si la mid - badhamada on xaq u- iyo geesaha-gacantiisa bidix ee bogga leexashada noqon lahaa fiican.
Amazon ayaa sheegtay Paperwhite ku socdaa ilaa lix toddobaad reading 30 daqiiqo maalintii (21 saacadood ee total) la Nuurkii qarka u saaran inay 10 ka mid ah 24 heerarka. Taasi waa laba toddobaad ka yar Paperwhite hore la isla goobaha, laakiin si fudud dheer oo ku filan inay ku dhameystaan ​​buug ama laba.
Waxaan u suurtagashay in ay ku dhameysan laba 400-page buugaagta la mode diyaarad on hor u baahan nasto Paperwhite ah. Tegida ku xirnaanta Wi-Fi iyo 3G on miiro batteriga si dhakhso ah.
The madow jilicsan-taabashada dib waa u fududahay in ay gacanta laakiin diiro boodh. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Shidin Paperwhite The 2015 Kharashka la mid ah sida jiilka hore ee £ 109,99 for version a Wi-Fi oo kaliya dalabyo gaar ah, taas oo ka dhigeysa xayeysiiska on inay lockscreen ee buugaagta iyo gelinno kale.
version A la 3G ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa ujecel £ 169,99, halka ay ka saareen xayeysiis kharashka £ 10. Waxaa hadda diyaar u ah pre-si maraakiibta on 30 June.
Ma ahan orgida a Rafaa ka badan sanadkii la soo dhaafay ee shidin Paperwhite ama kii hore, laakiin waa horumar la taaban karo ka gaareen Amazon ee aasaasiga ah shidin oo waa muran ka khayr badan ugu xafiiltamaan kale la mid jaban.
Waxa kale oo aan waa wax wanaagsan sida dhoofkii, taas oo weli waa aan jeclaa e-akhristaha, laakiin waa £ 60 raqiisan.
Sidaa darteed Paperwhite waa qof ah akhristaha buug ballaaran, jeclaan lahaa in ay helaan maktabadda weyn Amazon iyo ma xusuusan xidhan waxaa galay, laakiin aan caloosha kartaa bixinta badan ka badan £ 100 aallada hal isticmaal ah. Ujeedada in, waa heer sare.
Iidooyinka: screen weyn, fududahay in la isticmaalo, eegto-up iyo X-ray sifooyinka waa weyn, xataa backlight, kala duwan oo badan oo accessories, dukaanka buugga ballaaran
Arrrimaha: qaali aallada hal isticmaal ah, ma hagaajin automatic ah backlight ah, ma badhamada page jeedo
Words, xuruufta, gaabiyey iyo qormo ayaa dhamaantood la heli by kaliya haysta farta ka badan xarfaha. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
• dib u eegis Amazon shidin safarkan: tayada qaali ah laakiin top e-akhristaha
• dib u eegis Paperwhite shidin: screen hor-shiday dhigaysa reading farxiyo
• Tesco Hudl 2 dib u eegis: badan oo kiniin ah ee lacagta
• Apple iPad mini 3 dib u eegis: a taaban badan oo la mid ah
• Samsung Galaxy Tab S dib u eegis: soo horjeeda a for iPad ah?
At 15, Google dulmar ah ee la soo dhaafay, indhaha mustaqbalka
iPhone 6 wararka xanta ah, taariikhda lagu sii daynayo iyo qiimaha
Twitter ka fiirsaneysa Xiridda Down Service Music
Apple darista Scanner faraha si New iPhone?
Amazon.com, Qodobka, E-akhristayaasha, Qalab, shidin, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Technology
← Ahaa Nokia ah 3210 telefoonka ugu weyn ee waqtiga oo dhan? daroogada Parkinson iyo murugada bedeli xukun moral, shows waxbarasho →